အသည်းနှင့် အသည်းကင်ဆာ ~ Nge Naing
Sunday, September 26, 2010 Nge Naing 8 comments
ကျွန်မ မိတ်ဆွေတွေအထဲမှာ အသည်းမကောင်းသူတွေ များစွာ ရှိပြီး အမေရိကားကို ရောက်နေတဲ့ တချိန်က ရင်းနှီးတဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေဟောင်း တဦးလည်း အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်ကြောင်း စမ်းသပ်တွေ့ရှိရတယ်လို့ လတ်တလော ကြားသိလိုက်ရလို့ ဒီပို့စ်ကို တင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက အသည်းနဲ့ အသည်းကင်ဆာ အကြောင်းကို တင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အသည်းနှင့် အသည်းကင်ဆာအကြောင်းကို မစခင် ကင်ဆာရောဂါရဲ့ အခြေခံ သဘောသဘာဝ အနည်းငယ်ကို အရင်တင်ပြထားပါတယ်။ ကင်ဆာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပုံ (Dignosis) နဲ့ ကုသမှုအပိုင်းကို ဒီပို့စ်မှာ တင်ပြထားခြင်း မရှိဘဲ နောက်ပိုင်း အလျဉ်းသင့်ရင် သီးသန့်ဖေါ်ပြဖို့ အစီစဉ် ရှိပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ ကင်ဆာရောဂါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး အသည်းကင်ဆာ အမျိုးအစားနှင့် ရောဂါ အဆင့်သတ်မှတ်ပုံကို အဓိက တင်ပြထားပါတယ်။ (ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်တဲ့ မေးခွန်းတချို့ကို ပို့စ်တင်ခါစက မပါပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်။)
Malignant Tumor က ကင်ဆာဆဲလ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၎င်းစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို Carcinoma (ကင်ဆာစတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စတင်ဖြစ်ပွားရာကနေ တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာ၊ ပွားလာပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင် တစ်သျှူးတွေအထိ ပြန့်နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းအဆင့်ကိုတော့ အစဦးကင်ဆာ (Primary Cancer) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်လာတဲ့ အခါမှာ အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင် တစ်သျှူးမှာတင်မကပဲ ကင်ဆာဆဲလ် တချို့ဟာ အဝေးကို လွင့်သွားပြီး အဝေးမှာရှိတဲ့ အရိုးအပါအ၀င် တခြား အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တခုခုမှာ သွားပြီးတွယ်ကပ်ကာ ဆက်ပွားပါတယ်။ ၎င်းကို Secondary Cancer/Matastasis (ဆင့်ပွားကင်ဆာ) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အသည်းကင်ဆာအပါအ၀င် ကင်ဆာအများစုရဲ့ အခြေခံ ဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းကင်ဆာ အကြောင်းကို မပြောခင် အသည်းအကြောင်းကို အနည်းငယ် ဖေါ်ပြသင့်ပါတယ်။ အသည်းက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ အတွင်းအင်္ဂါအစိတ်မပိုင်းများအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်း နံရိုးတွေ အောက်နား၊ ညာဘက်အဆုပ်နှင့် ကန့်လန့်ကာကြွက်သား (Diaphragm) ရဲ့ အောက်တည့်တည့်မှာ ရှိပါတယ်။ ပိရမစ်ပုံ ရှိပြီး ဘယ်ဘက်နဲ့ ညာဘက် စိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအဖြစ် တွယ်ဆက်လျက် ရှိပါတယ်။ အသည်းဟာ အရွယ်အစားကြီးသလောက် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လုပ်ပေးရတဲ့ အလုပ်ကလည်း အင်မတန် များပါတယ်။ အသည်းဟာ နှလုံးမှ အောက်စီဂျင် သယ်လာသော သွေးကိုလက်ခံပြီး နှလုံးမှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးသို့ ပြန်ဖြန့်ဖြူးရန် နှလုံးသို့ အာဟာရပါတဲ့ သွေးကို ပြန်လည်ပို့ပေးပါတယ်။ အသည်းက ပို့ပေးတဲ့ အာဟာရကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးအတွက် လည်ပတ်ဖို့ စွမ်းအင်ကို ရရှိပါတယ်။
(၉) အရက်လို ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဒုက္ခပေးတဲ့ အရာတွေကို အဆိပ်မဖြစ်အောင် ခြေဖျက်ပေးခြင်းနှင့် အညစ်ကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း စသည်တို့အပါအ၀င် အသည်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လုပ်ငန်းများစွာကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အသည်းမကောင်းသော သူတဦးမှာ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် မထိခိုက်အောင် ဆရာဝန်နှင့် အနီးကပ်တိုင်ပင်ပြီး ဆရာဝန် ညွန်ကြားချက်အတိုင်း ပြုမူကျင့်ကြံ နေထိုင်စားသောက်ရန် အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
(၁၅) ဘယ်လောက်မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် တခါ (How often) စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်သလဲ။
September 27, 2010 at 1:31 AM Reply
အသဲနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေ သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေ ခုလိုရေးပေးတော့ သိရတာပေါ့..အန်ကယ်နိုင်ကိုတော့ ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်တွေ သောကြာနေ့မှာ စဉ်းဝေးဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်..
September 27, 2010 at 8:36 AM Reply
အသဲကင်ဆာ ဖြစ်နေသူမှာ ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ အပိုင်းကအသဲကို တ၀က်ထုတ်ပစ်လိုက်င် လျှင်ကင်ဆာ ပြန်ဖြစ်နိုင်သေးလား။
အန်ကယ်နိုင်မှာ ဖြစ်နေတာ အသည်းခြောက်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ Primary Liver Cancer ဖြစ်တဲ့သူအများစုက အသည်းခြောက်သူတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒါက အဖြစ်နည်းတဲ့ အမျိုးအစားပါ။ အသည်းခြောက်တာနဲ့ အသည်းကင်ဆာနဲ့ မတူပါဘူး။ အန်ကယ်နိုင် ရောဂါက ကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူး။ အသည်းအစားထိုးရင် ဒါမှမဟုတ် ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရင် တလနှစ်လအတွင်း အသည်းပုံမှန် ပြန်ဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
နောက်တယောက် မေးထားတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အသည်းထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကင်ဆာက စဖြစ်နေတဲ့ နေရာကနေ ဘယ်မှမပြန့်သေးရင် ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းကို ဖြတ်ထုတ်ပစ်လို့ အမြစ်ပြတ်နိုင်တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါတရံ ပထမစမ်းသပ်ချိန်မှာ တခြားသွေးကြောတွေထဲ ပြန့်နေတာ မတွေ့ဘဲ နောက်မှ ပြန်တွေ့တာလည်း ရှိတတ်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး စစ်ဆေးမှု ပြန်လုပ်နေဖို့တော့ လိုပါတယ်။
September 27, 2010 at 2:38 PM Reply
မရောက်တာ အတော်ကြာနေမှ ဘလော့ဂ်တစ်ခုမှာ ဒီခေါင်းစဉ်လင့်ခ်တွေ့လို့လာဖတ်သွားပါတယ်။
အသည်းကင်ဆာဖြစ်ရသော ပက်သက်နေတဲ့အကြောင်းများထဲတွင် ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ အရက်သေစာအလွန်အကျွံသောက်စားမှုများသာမက toxin ဆိုတဲ့ အဆိပ်အတောက်များလည်းပါပါတယ်။ ဥပမာ Aflatoxin လို့ခေါ်တဲ့ မှိုကဖြစ်လာတဲ့ အဆိပ်တစ်မျိုးဆို အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ငရုတ်သီးအခြောက်တွေထဲမှာ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အကြာကြီးထားထားရင်ပေါ့။ တခြားသော အခြောက်ခံ စားစရာများမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ ပြောင်းဖူးအခြောက်တွေ၊ စပျစ်သီးခြောက်တွေ စတဲ့အစားအစာတွေမှာ တွေ့တတ်ပါတယ်။ တော်ရုံရေဆေးရုံနဲ့လည်းမပြောင်တတ်ပါဘူး။ မီးနဲ့ကြော်လို့လည်း အကုန်အစင်မသေတတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုအစားအစာတွေ ကြိမ်ဖန်များစွာစားသောက်နေသူများမှာ အသည်းကင်ဆာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အပေါ်က အသည်းကင်ဆာကို ဖြတ်ထုတ်ဖို့ မေးခွန်းကို သိသလောက် ဝေမျှဖြေဆိုရမယ်ဆိုရင် ကင်ဆာက အသည်းကစတာဆိုရင် ဖြတ်ထုတ်လည်း အခြေအနေက လုံးဝမလွယ်တော့ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ အဝေးကြီးပြန့်တယ်ဆိုတာ သွေးကြောတွေကတဆင့်ပြန့်တာပါ။ အသည်းက လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးလှတဲ့အတွက် သူ့မှာ သွေးကြောတွေ (blood supply) တအားများပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့လူနာက ဗိုက်အောင့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်လုံးတွေဝါလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာဝန်ဆီရောက်လာပြီး ဆရာဝန်က CT scan နဲ့ ဖြစ်စေ အခြား သော scanning technology နဲ့ဖြစ်စေ scan လုပ်၊ အသားစတွေဘာတွေယူ စစ်လိုက်လို့ liver မှာ primary တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ တစ်နေရာရာကိုပြန့်ထားပြီးဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ imaging technique တွေဖြစ်တဲ့ CT တို့ MRI တို့ဆိုတာ အလုံးလေးဖြစ်လာမှ မြင်နိုင်သိနိုင်တာပါ။ ဆဲလ်သေးသေးလေးတွေကို မထောက်လှမ်းနိုင် မမြင်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အသည်းလိုသွေးကြောများတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းမှာ primary တွေ့ပြီဆိုမှတော့ သေးငယ်လှတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်လေးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ က အနည်းဆုံးတစ်နေရာကိုတော့ပြန့်ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ တခြားနေရာမှာ CT ရိုက်လို့ secondary တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့ပေါ့။ နောက်တစ်ခုက ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို immortal cells တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ မသေနိုင်လှဘူးပေါ့။ မသေနိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေဟာ သာမာန်ဆဲလ်လိုမဟုတ်ပါဘူး..တော်တော်ကို အငြိမ်မနေနိုင်တာပါ။ ဟိုသွားဒီသွား လျောက်သွား လျောက်ပြန့် ဒုက္ခပေးနေရမှ။
Primary liver cancer ဟေ့ဆိုရင်တော့ Five year survival rate ဆိုတဲ့ နောက်ထပ်ငါးနှစ် အသက်ဆက်ရှင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး က အလွန်နည်းပါတယ်။
စာထဲက လူနာတွေမေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းတော်တော်များများကတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတော်တော်များများက ဆရာဝန်များက မမေးခင်ကတည်းက ဖြေပါလိမ့်မယ်။ ဖြေတာမှ အပိုင်သိပြီဆိုတာနဲ့ sue ပြဿနာ ကြောက်လို့ အားမနာတမ်းပြောမှာ။ တိုးတက်ပြီး နိုင်ငံများမှ လူတွေကပြဿနာ ကြံဖန်ရှာတတ်လွန်းလို့ အခေါင်းကိုဘယ်နေ့ကတည်းကကြိုဝယ်ထားဆိုပြီး ဖြစ်နိုင်ရင်ပြောလိုက်ချင်ကြသေးတယ် ဆိုကြောင်းပါ။
ဘလော့ပိုင်ရှင်ရေ သိသမျှလေး ဝေမျှတာနော် :)
September 27, 2010 at 3:52 PM Reply
September 27, 2010 at 4:53 PM Reply
အပေါ်က ပြောတဲ့ သွေးကြောကနေပြန့်တယ်ဆိုတာ မူလပထမ ကင်ဆာရှိနေရာမှ အဝေးကြီးမှာရှိသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန့်တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာဆဲလ်များဟာ မူလပထမနေရာမှ ကပ်လျက်ရှိသော နီးသော အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းပြန့်နိုင်ပါတယ်။
အသည်းကိုဖြတ်တောက်ကုသတယ် ဆိုရာမှာ အခြားနေရာများမှ ကင်ဆာက အသည်းမှာ secondary လာဖြစ်နေတယ်.. မူလပထမ ကင်ဆာကလည်း ဆိုးဝါးတဲ့ကင်ဆာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် တော့ ဖြစ်တောက်ကုသ ပြီး နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာသက်တမ်း ဆန့်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အသည်းက မူလပထမ စဖြစ်တာဆိုရင်တော့ ငါးနှစ်သက်တမ်းရှိအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာတောင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါတယ်။
September 27, 2010 at 5:24 PM Reply
လာရောက် ဖြည့်စွက်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Aubergine. လက်တလုံးနီးပါး ထူတဲ့ ပညာပေးစာအုပ်လေးထဲက လိုအပ်တယ်ထင်တာကိုပဲ ကောက်နှုတ်ထားတာ ဖြစ်လို့ ဒီပို့စ်က ပြည့်စုံမှု မရှိပါဘူး။ အောက်ဆုံးမှာ မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ထည့်ပေးထားတာကလည်း Public Health in Myanmar မှာ စာရေးတဲ့ နှစ်နှစ်တာ ကာလအရ လူနာအတော်များများဟာ မိမိကုသနေတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ မမေးဘဲ ဘလော့ဂ်မှာ လာလာမေးနေတာ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရလို့ သတိပေးပြောကြားတဲ့အနေနဲ့ အတွေ့အကြုံအရ လိုအပ်လို့ ထည့်ပေးထားခြင်း ဖြစ်တယ်။ လူနာကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီး ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်သည်သာ လူနာအခြေအနေကို အသိဆုံးပဲမဟုတ်လား။
ပြီးတော့ ဆက်လက်အသက်ရှည်နိုင်တဲ့ သက်တမ်းကို အတိအကျ မထည့်ထားပေးတာကလည်း တယောက်နဲ့တယောက် ရောဂါကို တုံ့ပြန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားအပေါ်မှာလည်း မူတည်လို့ အတတ်နိုင်ဆုံး အရှုံးမပေးပဲ ရင်ဆိုင်သွားစေချင်တာလည်း ပါပါတယ်။ ဥပမာ ၆ လပဲ ခံမယ်လို့ ပြောထားခြင်း ခံထားရဖူးသူ တယောက်ကလည်း ၁၀ နှစ်ခန့်အထိ မသေသေးတာမျိုး ရှိတတ်တော့ ဆေးပညာအရ အဖြေရှာလို့ မရနိုင်ပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်အင်အားနဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ဆက်ရှင်သန်နေသူတွေလည်း ရှိတဲ့အတွက် သက်တမ်းကို အဓိကမပြောခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
2007/2008 မှာ University of Technology Sydney နဲ့ Woollogong University နှစ်ခုက သြစကြေးလျားနိုင်ငံရဲ့ တက္ကသိုလ်တွေအထဲမှာ Teaching and learning မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်မပြောခဲ့တုန်းက ငယ်နိုင် မဟုတ်မဟတ်တွေ ဖြီးထားတယ်ဆိုပြီး လာရေးသွားပြီး ကျွန်မပြန်ရေးထားတာကို ပြန်လာဖတ်တာ တခါမှ မတွေ့လို့ http://nge-naing.blogspot.com/2010/08/blog-post_16.html မှာ အခုပြန်သွားဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Aubergine အခုဒီပို့စ်မှာ အခုလို ပညာရှင်ဆန်ဆန် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လာရောက် ဖြည့်စွက်ပေးတာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
September 28, 2010 at 8:01 PM Reply
(၁) ဟုတ်ကဲ့. စာအုပ်ထဲကဟာတွေ တစ်ချို့ကို ကောက်ယူ ပြီးဆီလျော်အောင် ဗမာလိုပြန်ရေးထည့်ထားတာ သိပါတယ်။
(၂) ပေးထားတဲ့ပို့စ်အဟောင်းကို သွားကြည့်ပြီးပါပြီ။ ဆဲထားတာလည်းမိုးမွှန်နေရော.. ကြက်သမားတွေကော၊ လူပြိန်းတွေကော..ငါနဲ့မကိုင်တုတ်တာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျောင်းကိစ္စက ပြန်ချေပ ထားတာတော့ Flaw (အနာအဆာ ချွတ်ယွင်းချက်) တွေအများကြီးတွေ့နေရတုံးပဲ။ သို့သော်လည်း ရှိပါစေတော့လေ။ ဘယ်ကျောင်းက အောင်အောင် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပြည့်ဝအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ လည်ပင်းမှာ ဒင်္ဂါးအဆွဲ ခံရတဲ့ ပုတ်သင်ညိုလား အိမ်မြောင်လား အဲ့ဒီကောင်လို မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
မူရင်း အာတီကယ် နဲ့မဆိုင်လို့ အကျယ်မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး